नेपाली अभिनेत्रीहरू : बस्न नजान्दा कस–कसले देखाए गोप्य अङ्ग? पहिरनको हेक्का नराख्ने को–को भए मालफङ्शनको शिकार ?
काठमाडौं । फेसन र पहिरनले सुन्दरता देखाउन उद्दत देखिने चलेका अभिनेत्रीहरूले लगाउन नजान्दा, बस्न नजान्दा ‘माल फङशन’को शिकार हुनु परेको छ ।
केही वर्षअघि एउटा गसिप साप्ताहिकमा अभिनेत्री वेनिशा हमालको तस्बिर प्रकाशित भयो । सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा रातो वान-पिसमा देखिएकी वेनिशा ‘माल फङ्शन’को शिकार मात्र भइनन्, पत्रिकाले उनको गोप्य अंगलाई ‘ब्लर’ नै गरेर प्रकाशित गरेको थियो ।
दैनिक नेपालको अध्ययन अनुसार, प्रायः अभिनेत्रीहरू वान पिस लगाएर सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा ‘माल फङ्शन’को शिकार हुने गरेका छन् । एउटा कार्यक्रममा अतिथि बनेर पुगेकी करिश्मा मानन्धरले कस्तो रङ्को पेन्टी लगाइन् भन्ने प्रस्ट कैद भयो, क्यामेरामा । उनले बस्ने विषयमा हेक्का राखिनन् ।
हुन त गसिपका लागि अभिनेत्रीका गोप्य अंग ताक्दै हिँडेका कतिपय पत्रकारसँग विवाद पनि भएका छन् । एउटा अवार्ड कार्यक्रममा अभिनेत्री निशा अधिकारी, सहाना बज्राचार्यसँग एकजना फिल्मी पत्रकारको झगडा नै परेको थियो ।
वान पिस लगाएर कार्यक्रममा उपस्थित भएका अभिनेत्रीका गोप्य अंगमा उनका क्यामेरा तेर्सिए पछि अभिनेत्रीद्वय आक्रोशित मुद्रामा उत्रिएका थिए । जसलाई अर्का पत्रकार प्रकाश सुवेदीले मिलाउने कोशिश गरेको घटना पनि छ ।
अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल सेता रङको पेन्टीमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भइन् । बुट्टे वान पिसमा सजिएर पुगेकी शिल्पा बस्न नजान्दा उनको भित्रि बस्त्र क्यामेरामा कैद भएको थियो ।
(दैनिक नेपाल बाट साभार सामग्री)